Akụkọ - kslọ ọrụ na-ebugharị na Volkswagen ga-amalite na Germany na March na-abịa
EV odori modul
IP65 nnukwu nchedo modul
Super dịgasị iche iche mgbe nile ike Nchaji modul
40KW elu arụmọrụ odori modul
30KW elu arụmọrụ odori modul
20KW High arụmọrụ Nchaji modul
15KW High arụmọrụ odori modul
V2G Bidirectional chaja
Nchaji na ike nchekwa modul
Kslọ ọrụ na-ebugharị Volkswagen ga-amalite na Germany na March na-abịa
Nkewa nke Volkswagen Group ewepụtala ma wepụta ọdụ ebe a na-akwụ ụgwọ maka ụgbọ ala eletriki, igwe eletriki eletriki na igwe eletriki eletrik, nke a na-akpọ ọdụ ụgbọ mmiri Volkswagenpassat. Iji mee emume ncheta afọ iri asatọ ya, Volkswagen ga-arụnye ebe ntanetị 12 na-akwụ ụgwọ na Wolfsburg, Germany. Stationlọ ọrụ na-ebugharị Volkswagen Passat na-enye 200 kWh nke ike, nke yiri ike nke e-Golf nke nwere batrị 5.6.
Lọ ọrụ na-ebugharị igwe na-esite na ike “akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ”: anyanwụ na ifufe. Dịka ọrụ ịnya ụgbọ maka ịgba ụgbọ ala eletrik, ndị bi na Wolfsburg nwere ike iji ya n'efu. Batrị nke ụlọ ọrụ na-ebugharị ekwentị nwere ike ịrụ ọrụ n'adabereghị na isi ọkọnọ ike yana enwere ike ịgba ụgwọ ma ọ bụ dochie ya.
A ga-akwaga ọdụ na-ebugharị na-agagharị na ebe dị iche iche dị ka mkpa obodo si dị ugbu a. Iji maa atụ, n’ebe a na-eme nnọkọ oriri na ọ socialụ socialụ, egwuregwu bọọlụ, ma ọ bụ egwu, ụlọ ọrụ ndị na-akwụ ụgwọ dị otú ahụ nwere ike ịgba ụgwọ ụgbọala anọ dị iche iche, dịka ịnyịnya igwe eletriki na ọkụ eletrik. Na nkenke, Volkswagen na-ezube itinye ego 10 nde n'ime obodo Wolfsburg, Germany iji wuo akụrụngwa na-akwụ ụgwọ. A ga-ehiwe ụlọ ọrụ izizi nke ụlọ ọrụ 12 na-akwụ ụgwọ na Machị 2019, a ga-etinyekwa ya na netwọọdụ ntinye akwụkwọ na ekwentị mkpanaaka.
Klaus Mors, Onyeisi Obodo nke Wolfsburg, Germany, nakweere atụmatụ ahụ iguzobe ebe a na-adọba ụgbọala iri na abụọ n’obodo ahụ ma kwuo, sị: “Volkswagen na Wolfsburg ga-azụlite smart mobile njem n’ọdịnihu. Isi ụlọ ọrụ nke otu ahụ, Wolfsburg, bụ ụlọ nyocha mbụ iji nwalee ngwaahịa ọhụrụ Volkswagen tupu ha abanye na ụwa n'ezie. Ebe a na-akwụ ụgwọ bụ ihe dị mkpa n'ịmepụta netwọkụ na-akwụ ụgwọ nke ọma nke ga-agba ndị mmadụ ume ịhọrọ ụgbọ eletrik. Travelkpụrụ njem eletrik eletrik ga-akawanye mma. Ọdịmma ikuku nke obodo mepere emepe na-eme ka obodo nwee udo. ”
Post oge: Jul-20-2020